कोरोना महामारीपछि मेलेसियाका पाम आयात बालीमा ठूलो मात्रामा कामदार भित्र्याउने , नेपालबाट कति ? - samachar
Home > समाचार > कोरोना महामारीपछि मेलेसियाका पाम आयात बालीमा ठूलो मात्रामा कामदार भित्र्याउने , नेपालबाट कति ?
मलेसियाले ६ साताभित्र १ लाख ८० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने भएको छ।
कोरोना महामारीको कारण समस्यामा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई गति दिन मलेसियाले ठूलो संख्यामा कामदारहरु भित्र्याउन लागेको मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम सराभनमले बताए।
बुधबार उनले शुक्रबारदेखि दैनिकरूपमा अनुमति प्रक्रिया छिटो गराउन एक विशेष कमिटी स्थापना गरिएको बताएका छन्।
कोरोना महामारीपछि मेलेसियाका पाम आयात बालीमा ठूलो मात्रामा कामदारको अभाव देखिएको छ। सोही अभाव पूरा गर्न मलेसियाले विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना अघि सारेको हो।
पाम आयलमा देखिएका कामदार अभावको कारण अहिले मलेसियाले अर्बौं डलरको नोक्सानीको सामना गरिरहेको छ।
पाम आयलको बालीमा काम गर्दा फोहोर देखिने, जोखिमपूर्ण हुने र कठिन हुने भएकाले स्थानीयहरुले यो काम गर्न त्यति रुचाउँदैनन्। त्यसैले मलेसियाले विदेशी कामदारलाई यो कामका लागि भित्र्याउने गरेको छ। अहिले मलेसियामा दर्ता भएका ११ लाख ७० हजार विदेशी कामदार छन्।
यो पनि..कतारले सुरक्षागार्ड र सफाई कर्मचारी बाहेकका बिदेशी कामदारलाई ५ महिनाको लागि घर पठाउने
विश्वकप फुटबल हेर्न आउने समृद्ध दर्शकका नजरमा नपरून् भनेर आप्रवासी श्रमिकहरूलाई चार महिनाका लागि स्वदेश पठाउने कतार सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण बताउदै आएका छन् ।
बिश्वकपको उत्तरार्धमा निर्माण र अन्य क्षेत्रको लगभग जसो काम सकिने हुँदा ती कामदार हरु स्वतह घर फर्कनु पर्छ । केही मात्रामा आवश्यक कामदार बाहेकका निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुलाई पठाउने तयारी गरेको छ भने केही कम्पनीहरुले छुट्टि वा क्या’न्सिल समेत गरेको बताइन्छ ।
बिश्वकपमा आवश्यक स्वास्थ्य, सुरक्षा, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र सपिङ मल र फ्या’सिलिटी म्यानेज’मेन्ट कम्पनी र सफाई कर्मचारीलाई भने कतारले कतारमै राख्ने छ । तर ती बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई भने कतार सरकारले घर पठाउने बताइएको छ र सो समयको तलब लगभग चार महिनाको तलब कम्पनीलाई कमदारलाई उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ ।
यता नेपालीहरुले फुटबल महामेला आयोजना गर्ने कतारी सपना पूरा गराउन आठ रंगशालासहित पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन पसिना बगाएका नेपालीलगायत विभिन्न मुलुकबाट गएका श्रमिकहरूको घोर अपमान भएको छ ।
जसले कतारको शोभा बढाउन आफ्नो श्रमको योगदान दिए, तिनकै उपस्थितिलाई विश्वकपको शोभाविपरीत मान्ने यो मानसिकता अशोभनीय मात्र होइन, खेदजनक नै छ ।
आप्रवासी कामदारहरूलाई बिलकुलै फरक दर्जाको मानिसको व्यवहार गरेको यो अमानवीय निर्णयलाई कतार सरकारले सच्च्याउनु आवश्यक छ ।